Waa maxay khaladka kaa diidaya inaad faraxsanaato?
Maxaynu u dareemaynaa farxad la'aan
Sababta ugu weyn ee aan loogu qanacsanayn nolosha waa u wareejinta mas'uuliyadda tayadeeda kuwa kale. Mararka qaarkood rabitaan aad u weyn oo lagu farxo qof walba ayaa tan lagu daraa. Natiijo ahaan, noloshaadu way joogsatay inaad adigu leedahay, oo aad dareento farxad la'aan maalin kasta.
Sida aad u faraxsan tahay
Waxaad u baahan tahay inaad nolosha ku qaadato gacmahaaga.
Ha ka filan qof ama shay inay kaa farxiyaan.
Qofna ma awoodo mana aha inuu mas'uul ka noqdo wanaaggaaga. Haddii aad u maleyneyso in maalin maalmaha ka mid ah farxad ay si fudud u garaaci doonto albaabkaaga, u diyaargarow xaqiiqda ah inaad sugto waqti dheer, iyo nolosha rajadaas oo kale hubaal ma faraxsanaan doonto.
Ha isku dayin inaad dadka kale ka farxiso
Qaar badan oo naga mid ah waxay ku bixiyaan waqti iyo lacag si ay u kasbadaan raallinimada kuwa nagu xeeran. Marka noloshaada oo dhan ay ku dhisnaato rabitaanka dadka kale, waxaad noqonaysaa lahayste, waxaad joojinaysaa inaad naftaada la noolaato oo aad go'aannadaada gaadho. Tani macnaheedu maaha inaad u baahan tahay inaad ilowdo qoyska iyo asxaabta oo aad isu beddesho egoist. Waqti la qaado kuwa aad jeceshahay, daryeesho, laakiin ha u helin farxaddaada.
Ka fakar: intee in le'eg ayay qaadataa in la sugo jacaylka iyo ogolaanshaha qaybta labaad, waalidiinta ama kuwa la yaqaan? Laakin daqiiqadahaan waxaa loo isticmaali karaa faa'iido nafsadeeda.
Wanaaggaagu waa masuuliyadaada oo kaliya. Isku day in aad hesho ilo farxadeed oo adiga oo keliya aad maamusho. Kuwani waxay noqon karaan hiwaayadaha xiisaha leh, dhacdooyin macno kuu leh, iyo yoolalka mustaqbalka.
Jim Rohn Entrepreneur, af-hayeenka, qoraa toddobada xeeladood ee fudud ee hantida iyo farxadda.
Waa in aad mas'uuliyad iska saartaa naftaada. Ma bedeli karno xilliga ama duruufaha, laakiin waan bedeli karnaa nafteena.
Samaynta xeerar adiga kuu gaar ah ayaa ah habka ugu wanaagsan ee aad ugu noolaan karto nolol farxad iyo raynrayn leh. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in wax kasta oo aad sameyso ay tahay doorashadaada shakhsi ahaaneed, taas oo aan wax shaqo ah ku lahayn dadka kugu xeeran.
Qaadashada mas'uuliyadda farxaddaada mar walba waa cabsi. Marka hore, waxaad dib ugu noqon kartaa xaaladihii hore ee dhintay oo haddana aad hoos ugu dhacayso saamaynta kuwa kale.
Si aad u fahamto in aad jihada saxda ah u socoto iyo inkale, si joogto ah naftaada u waydii afar su'aalood oo ogaanshaha:
Waa maxay waxa kuugu muhiimsan nolosha?
Miyaad qaadataa go'aanno gaar ah si aad dadka kale uga farxiso?
Maxaa ka sii muhiimsan, ra'yiga dadka kale ee adiga kugu saabsan ama ra'yigaaga naftaada?
Maxaad ugu jeceshahay inaad ka qabato hawl maalmeedkaaga?
Su'aalahan ayaa kaa caawin doona inaad fahamto sida aad ugu xiran tahay dadka kale, iyo sidoo kale hiwaayadahaaga iyo yoolalkaaga.
Mandy Hale Qoraaga Single Lady. Sida aan u beddelay heerkayga "raadinta weligeed ah" una beddelo "free oo faraxsan", blogger.
Farxaddu waa shaqo gudaha ah. Waligaa ha u gudbin mas'uuliyadda wanaaggaaga.
Xusuusnow in aad haysato hal nolol oo kaliya oo aad masuul ka tahay tayada. Ha ka baqin inaad abuurto farxad adiga kuu gaar ah.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Waa maxay khaladka kaa diidaya inaad faraxsanaato?!